के महिलाले हस्तमैथुन गर्दा हानिकारक हुन्छ ? « Nagarik Khabar
के महिलाले हस्तमैथुन गर्दा हानिकारक हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : 17 July, 2021 6:23 pm
काठमाडौं । म २५ वर्षकी भएँ । मलाई याद छ कि पुरुषहरु विद्यालयमा हस्तमैथुनबारे खुलेर कुरा गर्थे । तर, केटीहरु रु स्पष्ट छ उनीहरुलाई यसको लागि स्वतन्त्रता छैन । यदि कुनै केटाले हामी सबैजसो केटीहरुलाई हस्तमैथुनको बारेमा सोधे भने हाम्रो जवाफ हुन्छ, ‘गरेको छैन, यो अश्लील हो ।’ हामी हस्तमैथुन गर्नेले पनि जवाफ यस्तै दिने गर्छौं ।
जबकि यही प्रश्न कुनै केटालाई सोधियो भने उनले धक नमानी भन्नेछन्, ‘लुकाउने कुरा के छ र रु हस्तमैथुन गर्छु ।’ यी जवाफहरुबाट के भेउ मिल्छ भने, महिलामा कामुकता हुँदैन र यस सन्दर्भमा पुरुष अगाडि छन् ।
त्यसो त घ्यू भन्ने बित्तिकै मोटाइने डरले मानिस आत्तिने गरेका छन् । तर घ्यूले शरीरमा
काठमाडौं । पेटमा अल्सर भएमा पिडा नाइटोबाट सुरु भई छातीसम्म दुख्छ । समयमै उपचार नगरे
एजेन्सी । मानिसको जन्मसँगै स्तनको नाता गहिरो गरी जोडिएको हुन्छ । आमाको स्तनपान मानिसको पहिलो